သင်တန်းသားများကို၏စုဆောင်းမှု, ကုသမှု၏ Random, ကုသမှုပေးပို့နှင့်ရလဒ်များ၏တိုင်းတာခြင်း: randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်ချက်လေးအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများရှိသည်။ ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်၏အခြေခံသဘောသဘာဝကိုမပြောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပိုမိုလွယ်ကူပို့ဆောင်ထောက်ပံ့ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစေပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, အတိတ်ကာလတစ်ခုကိုလူတွေသန်းပေါင်းများစွာ၏အပြုအမူတိုင်းတာရန်ခက်ခဲဖြစ်ရပြီလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အခုပုံမှန်အများအပြားဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်တွေအတွက်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ဤအသစ်ကိုအခွင့်အလမ်းများကိုအသုံးချဖို့ဘယ်လိုထွက်တွက်ဆနိုင်သူသုတေသီများယခင်ကမဖြစ်နိုင်ခဲ့စမ်းသပ်ချက်ကို run နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဒီအားလုံးနည်းနည်းပိုပြီးကွန်ကရစ်-နှစ်ဦးစလုံးအတူတူနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပြောင်းလဲသွားတယ်-ပါစေလိုက်ပါတယ်ရဲ့မိုက်ကယ် Restivo နှင့် Arnout ဗန်က de Rijt ခြင်းဖြင့်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားတည်းခိုခဲ့ရာစေရန် (2012) ။ သူတို့ဟာဝီကီပီးဒီးယားမှအယ်ဒီတာအဖွဲ့ပံ့ပိုးမှုများကိုအပေါ်အလွတ်သဘောသက်တူရွယ်တူဆုလာဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ချင်တယ်။ အထူးသဖြင့်, သူတို့က, မဆို Wikipedian ခက်ခဲအလုပ်နှင့်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယဝန်ခံဖို့အခြားမည်သည့် Wikipedian မှပေးနိုငျကွောငျးတခုချီးမြှင့် barnstars များ၏သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt Wikipedians ထိုက်သော 100 barnstars အပ်ပေးတော်မူ၏။ ထို့နောက်သူတို့ကလာမယ့်ရက်ပေါင်း 90 ကျော်ဝီကီပီးဒီးယားဖို့လက်ခံသူများ '' နောက်ဆက်တွဲပံ့ပိုးမှုများကိုခြေရာခံ။ သူတို့ရဲ့အံ့အားသင့်ဖို့အများကြီးသူတို့ barnstars ချီးမြှင့်တော်မူသောမှလူများတို့ကိုတဦးတည်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်နည်းပါးလာတည်းဖြတ်အောင်တော်မှာ။ တစ်နည်းမှာ barnstars တားထက်အလှူငွေအားပေးအားမြှောက်ခံရဖို့သလိုပဲ။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt တစ်ဦး "အထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းနှင့်စောငျ့ရှောကျ" စမ်းသပ်မှု run မကြသည် ဟူ. ၎င်း, သူတို့တစ်တွေ randomized ထိန်းချုပ်ထားစမ်းသပ်မှုအပြေးခဲ့ကြသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦး barnstar ခံယူ 100 ထိပ်တန်းမျှဝေသူရွေးချယ်ရာတွင်အပြင်, သူတို့ကလည်းသူတို့ကတဦးတည်းကိုမပေးခဲ့ပါဘူးဘယ်သူကို 100 ထိပ်တန်းမျှဝေသူခူး။ ဤရွေ့ကားပေါင်း 100 ဟာထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ နှင့်အညီ, ပြင်းထန်စွာ, ကုသမှုအုပ်စုကြီးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်အဘယ်သူသည်သူကျပန်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်လူများ၏အမူအကျင့်မှာကိုကြည့်ရှုသောအခါ, သူတို့ပံ့ပိုးမှုများလည်းလျော့ကျလာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်လူတို့အား (ဆိုလိုသည်မှာ barnstars လက်ခံရရှိ) လာသောအခါ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ကုသမှုအုပ်စုတစ်စုရှိလူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ကုသမှုအုပ်စုတွင်လူပေါင်း 60 ခန့်% ပိုမိုလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများ၏ပံ့ပိုးမှုများ deceasing ခဲ့ပေမယ့်ထိန်းချုပ်အုပ်စုသူတို့အားပိုမိုမြန်ဆန်ဤမျှလောက်လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်။
ဒီလေ့လာမှုကဖော်ပြသည်အမျှစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ထိန်းချုပ်အုပ်စုသည်အတန်ငယ်ဝိရောဓိသောလမ်းအတွက်အရေးပါသည်။ တိကျစွာ barnstars ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အလို့ငှာ, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt barnstars မခံမယူခဲ့ပါဘူးသူတွေကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လိုတယျ။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ, စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်သောသုတေသီများထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပျက်ကွက်။ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt တစ်ထိန်းချုပ်အုပ်စုတစ်စုရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ကအတိအကျမှားနိဂုံးချုပ်ရေးဆွဲခဲ့ကြပေသည်။ ခိုးမှုအဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်ဘို့, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခြင်းမရှိဘဲစမ်းသပ်မှုတစ်ခု run နေဘို့: ထိန်းချုပ်ရေးအုပ်စုများအဓိကလောင်းကစားရုံကုမ္ပဏီ၏ CEO ဖြစ်သူန်ထမ်းကသူ့ကုမ္ပဏီကနေအလုပ်ထုတ်နိုင်မှသာသုံးနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ပြောကြားခဲ့သည်ဒါကြောင့်အရေးကြီးလှသည် (Schrage 2011) ။
စုဆောင်းမှု Random, ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်ရလဒ်များ: Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ရပ်စမ်းသပ်မှုလေးအဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများဖော်ပြသည်။ အတူတူ, ဤလေးယောက်ပါဝင်ပစ္စည်းများသိပ္ပံပညာရှင်များဆက်စပ်မှုကျော်လွန်ရွှေ့နှင့်ကုသမှု၏ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုသည်။ အထူးသ, ကျပန်းကုသမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများရှိလူများကအလားတူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကအုပ်စုနှစ်စုအကြားရလဒ်များအတွက်မဆိုခြားနားချက်ကုသမှုနှင့်မရှက်ကြောက်မှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်။
စမ်းသပ်ချက်များ mechanics ရဲ့ကောင်းတဲ့ပုံဥပမာဖြစ်ခြင်းအပြင်, Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့လေ့လာမှုလည်းဒစ်ဂျစ်တယ်စမ်းသပ်ချက်များထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Analog စစမ်းသပ်ချက်သူတို့ထံမှလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်နိုင်သည်ကိုပြသသည်။ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ရဲ့စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်မည်သူမဆိုဖို့ barnstar ပေးရန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်နှင့် (ပြင်ဆင်ရန်သမိုင်းအလိုအလြောကျဝီကီပီးဒီးယားကမှတ်တမ်းတင်သည်ကို ထောက်. ) ကတည်းဖြတ်-ကျော်အချိန်ကာလတစ်ခုတိုးချဲ့ကာလ၏ရလဒ်ကို-number ကိုခြေရာခံရန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမကုန်ကျမှာကုသမှုကိုအတိုင်းအရှည်ရလဒ်များကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဤစွမ်းရည်ကိုအတိတ်တွင်စမ်းသပ်ချက်မတူဘဲသှေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုလူ 200 ပါဝင်သော်လည်း 2000 သို့မဟုတ်ပင် 20000 လူတို့နှင့်အတူပြေးခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်။ 100 တစ်အချက်အားဖြင့်၎င်းတို့၏စမ်းသပ်မှုတက်ချုံ့ချဲ့ထံမှသုတေသီများတားဆီးအဓိကအရာကုန်ကျမခံ, ဒါဟာကျင့်ဝတ်ခဲ့သည်။ အကြောင်း, Restivo သည်နှင့်ဗန်က de Rijt မထိုက်တန်သောအယ်ဒီတာများမှ barnstars ပေးချင်ကြဘူး, သူတို့ကသူတို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုဟာဝီကီပီးဒီးယားအသိုင်းအဝိုင်းနှောင့်အယှက်မှမလိုချင်ခဲ့ဘူး (Restivo and Rijt 2012, 2014) ။ ငါနောက်ပိုင်းတွင်ဤအခနျးတှငျနှင့်ကျအခနျး6မှာစမ်းသပ်ချက်များကကြီးပြင်းလာသည့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစဉ်းစားအချို့မှပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ Restivo နှင့်ဗန်က de Rijt ၏စမ်းသပ်မှုရှင်းလင်းစွာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်၏အခြေခံယုတ္တိဗေဒပြောင်းလဲသွားတယ်မရှိသေးပေစဉ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်စမ်းသပ်ချက်များထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်ကြောင်းပြသထားတယ်။ Next ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာဤပြောင်းလဲအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးသည့်အခွင့်အလမ်းများကိုခွဲထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ငါသုတေသီများအတိတ်၌ပြစ်မှားမိခဲ့ကြကြောင်းစမ်းသပ်ချက်များအမျိုးမျိုးနှင့်အတူယခုပွုနိုငျကွောငျးစမ်းသပ်ချက်နှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။